I-Zoe Kravitz Iifoto zeNude kunye neVidiyo yePorn kunye nokuDityaniswa kweziNdawo zoSondo - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
I-Zoe Kravitz Iifoto zeNude kunye neVidiyo yePorn kunye nokuDityaniswa kweziNdawo zoSondo
Jonga umlingisi oshushu we-ebony kunye nemodeli uZoe Kravitz ehamba ze kunye nezokwabelana ngesondo eqokelelwe kumdibaniso, ecaleni kweefilimu zakhe ezingamanyala zesini ezizimeleyo! Kwakhona, songeze njengeZoe Kravitz ezingenanto ezingenanto kunye nemifanekiso eshushu njengoko sinokufumana.
UZoe Kravitz (oneminyaka engama-31) ngumlingisi waseMelika, imvumi kunye nemodeli. Intombi yomdlali weqonga-mvumi U-Lenny Kravitz kunye nomlingisi uLisa Bonet, uKravitz ufumene ukubonwa ngokubonakaliswa kwakhe ngu-Angel Salvadore kwifilimu yeqhawe 'X-Men: First Class'. Yeyiphi eyalandelwa ziindima ezixhasayo kwi 'The Divergent Series' kunye 'Mad Max: Fury Road'. UZoe Kravitz unenkwenkwezi njengoLeta Lestrange kwifilimu ethi 'Amarhamncwa amnandi kunye neNdawo yokuzifumana' kunye nokulandelelana kwayo. Kwaye njengeCatwoman kwi'Lego Batman Movie 'kunye' neBatman '. Wayenendima ephambili kwiDope, 'uAdam Green's Aladdin', 'Gemini', 'Amanga Amakhulu Ambi', kunye noluhlu oluthi 'Ukunyaniseka okuphezulu'.
Iteyiphu yesondo kaZoe Kravitz ivuza
Ukuba sithetha ngothando lukaZoe kunye nobomi bezesondo, sinamahemuhemu anomdla! Uye wadibana ngokufutshane no-Ezra Miller ngelixa babefota 'Qaphela iGonzo'. UZoe naye wayenobudlelwane nomlingisi uPenn Badgley ukusukela ngo-2011 ukuya ngo-2013. Kwi-2016, uKravitz waqala ubudlelwane kunye nomlingisi uKarl Glusman kwaye batshata kwi2019.
Ngoku sinevidiyo ye-porn yesi sibini ephume kwi-Zoe's iCloud. Ewe, wayesazi malunga nabagculi abemba bejikeleza, kodwa asazi ukuba kutheni engayigcinanga le mfihlo. Ewe, nangona kunjalo, namhlanje lusuku lwethu lwethamsanqa, kuba uZoe Kravitz ubonwa ehamba ze, emunca inkuku yendoda yakhe. Emva koko balala ngesondo kwaye sinombono osondeleyo. Ityholo lakhe kunye ne pussy zakhe zandenza ndangqinga ngathi kukutshiza!
UZoe Kravitz uhamba zeesondo kunye nezesondo
‘UVincent N Roxxy’
Nangu uZoë Kravitz ehamba ze ehamba nomfana ophezu kwemoto ebusuku. Uyamphuza xa bekhulula. Emva komzuzu, uZoë uphela engenamphezulu emathangeni omfana kwaye balala ngesondo.
‘Yenza ngathi Siyanga”
UZoe Kravitz ke uhamba ze, njengoko umntu evuka ebhedini emfumana ehleli esihlalweni edesikeni phambi kwekhompyuter. Sibona iesile lakhe ecaleni, kunye nesifuba sasekunene. Ingono kaKravitz ikrobe phantsi kweenwele zakhe.
Emva koko uZoë Kravitz uhleli enqunu edesikeni phambi kwelaptop, njengoko ethetha nomfana osecaleni kwakhe. Iibunu zakhe ziyajongwa ngeenwele zakhe zijinga phezu kwayo. Emva kwethutyana, uyaphakama abeke iingalo zakhe kulo mfo, asinike umbono we-esile lakhe elihamba ze.
UZoë Kravitz utsala ihempe yakhe ukuze atyhile ibra eluhlaza, njengoko elala phantsi nomfana kwaye emanga. Yena nomfo emva koko bakhulula ngakumbi ngaphambi kokuba sibone uZoë evuka engenasinxibo ecaleni komfo kamva. Ukubonisa ii-tits ezingenanto xa ephuma ebhedini ngelixa eleleyo.
Ke sinoZoe Kravitz ehamba ze phantsi komfana njengoko besenza phantsi. Impundu yakhe iphantse yavela kwicala elisezantsi kwesakhelo.
IHottie uZoë Kravitz iphinda yenze nomfana ezantsi embhoxo. Utsala itanki lakhe phezulu ukuze atyhile i-cleavage kwi-bra. Sibona uZoë evuka ebhedini ecaleni kwalomfo emva koko, emva koko wahamba ejikeleza igumbi elingenasinxibo kwiilazi zelanga.
Ekugqibeleni, uZoë Kravitz uhleli kwividiyo yokuhlambela uncokola kwiLaptop kwaye utya kwisikhongozeli sokukhupha. Ingono yakhe ikhanya ibonakale phantsi kwamaqamza, ke ubopha itawuli. Emva kwethutyana, uhlala phantsi kwaye itawuli iyehla ukubhengeza ii-boobs zakhe ze.
Zoe Kravitz ongenasiphelo kunye nomfana ulala ngesondo elunxwemeni lomlambo phakathi kwengca. Balele ngamabele akhe ejonge. Umfo emva koko uhlala emva koko ajike ngecala, abonise iesile lakhe elingenanto. Emva koko sijonga okokugqibela amabele akhe ahamba ze xa emile kwaye enxibe itanki ephezulu.
Zoe Kravitz iifoto ze
Umlingisi odumileyo kunye nentombi kaLenny Kravitz, uZoe Kravitz, iifoto ezinganxibanga kunye nezingaphezulu ziqokelelwa apha! Akakhange abe ze kangangezihlandlo ezininzi kwiimagazini, kodwa safumana imifanekiso emininzi apho uZoe omncinci kwaye engaqhelekanga abonisa khona ama-boobs ahamba ze, kunye neengono kwezinye iincopho zokubona. Kwaye iilokhwe zokudubula iifoto!
Ukubonakala kwe-Zoe Kravitz ebomvu kwikhaphethi ebomvu
Ngaba uyakholelwa ukuba eli cutie liswele ingqalelo? I-Zoe Kravitz tits zibonwe kwiziganeko ezibini eziphambili kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ke ngoku sicinga ukuba umsebenzi wakhe uyehla, amabele apha ukuze amnike isandla sosindiso! UZoe odumileyo kwaye mhle wayenxibe ilokhwe emnyama yokubona eMET Gala eNew York, kwaye ii-boobs zakhe ezincinci zaqaqamba! Emva koko sacinga ukuba uphelile ngokuveza ezi boobies, kodwa uKravitz uvele kwitheko leOscars Vanity Fair enxibe enye into ngaphandle kwebhonkco legolide! Yintoni elandelayo ngokulandelayo, iimpahla ze ze ngokupheleleyo? Asiyi kuyikhumbula i-guuuurl, sinike isusu sakho!
Alicia Ilitye Lesilivere
I-freida pinto imifanekiso enganxibanga
laura ramsey ngesondo
Natalie portman imifanekiso enganxibanga